Inkulumo yomphakathi: iseluleko esiwusizo.
Ukukhuluma ngomphakathi kuyingxenye ebalulekile yokuphila komuntu webhizinisi. Esikhathini senqubo yomsebenzi, umuntu kufanele akhulume emihlanganweni yebhizinisi, axoxisane, uphendule imibuzo yombuzo, njll.
Izinhlobo zokukhuluma zomphakathi zihlukaniswa ngezindlela eziningana.
Isibonelo, ngenjongo: ulwazi, i-protocol-etiquette, ezijabulisayo, ezikholisayo. Ngohlobo lwenkulumo yomphakathi: umbiko, umyalezo, inkulumo, inkulumo, ingxoxo.
Ukuphumelela kokukhuluma komphakathi kuncike ezintweni eziningi, kucatshangelwa ukuthi, umuntu akanakunqoba kuphela ukwesaba ukukhuluma komphakathi, kodwa futhi abe yisikhulumi esihle. Ukusebenza komphakathi kudinga ukuqeqeshwa kwangaphambili, okunganakiwe ngisho nabanolwazi kakhulu.
Ngokwesiko, ukusebenza komphakathi kusekelwe kwisimiso sesigaba esinezinhlelo ezintathu: isingeniso, ingxenye enkulu, isiphetho.
Ukulungiselela inkulumo kuhlanganisa izigaba eziningana. Okokuqala, kubalulekile ukubona "isifuba" sokusebenza esikhathini esizayo: izisusa zabalaleli, umqondo oyinhloko wokukhuluma, izingxenye zenkulumo, amagama abalulekile, isakhiwo.
Ukwakha "ubuningi bemisipha" yokukhuluma ngomphakathi, kuyadingeka ukhethe izibonelo ezithakazelisayo ezikhanyayo (ezifushane), izinto zokubonwa okubonwayo kolwazi (imidwebo, ihluzo, imifanekiso), izikhathi zokukhalaza kubabukeli abanomgomo wokulungisa. Ukukhetha ulimi, kubalulekile ukwazi izinga lezingqondo nezamasiko zezilaleli. Ungasebenzisi amagama ongawaqondi kahle. Lokhu kungabangela "ukungaboni" okungalindelekile okungeke kuthinte kabi umbono wesikhulumi.
Ekupheleni kokulungiswa kwenkulumo, umuntu kufanele abone umbhalo ogcwele wenkulumo ephepheni noma emithonjeni ye-elekthronikhi, aphinde abuyele, anakekele ngokukhethekile amaqhinga ekuqaleni nasekupheleni kwenkulumo. Isingeniso kufanele siphumelele, isithakazelo abalaleli, nesiphetho ukushiya inkumbulo izici ezisemqoka namagama ayisihluthulelo womqondo oyinhloko.
Umbhalo wenkulumo, izitatimende eziyisisekelo, izibonelo noma izinhlamvu zingabhalwa ngokucophelela kumakhadi amancane, ahlelwe ngendlela ehlelekile.
Ukusebenza komphakathi kuwumqondo omuhle wokuzivuselela. Lokhu kukuvumela ukuba uzizwe uvela ngaphandle, ukuqonda incazelo nencazelo yombhalo, ukuze ubone lezo zikhathi ezinzima kakhulu kusikhulumi. Ukusekela ulwazi lombhalo ngezindlela zokuxhumana ezingekho amagama (ukuzithokozisa, ukubonisa ubuso, ukuma), umuntu angagcizelela imibono ebaluleke kunazo zonke, abuye aqonde ngokunencazelo incazelo yolwazi oludlulisiwe.
Umphumela wokubukeka komphakathi kuncike esikhathini. Inkulumo eqhubekayo ingaphazamisa hhayi kuphela umbono wokuqala, kodwa wonke umfanekiso wesipikha.
Ukubonakala kwesiphakamiso kuyisici sesibili esibaluleke kakhulu sokukhuluma komphakathi. Izembatho kufanele zikhululeke. Cabanga nje, uzobukeka kanjani uma kufanele wenze esiteji, futhi izethameli zizobukeka zisuka phezulu? Uma isikhulumi sihlezi etafuleni, futhi izethameli zingabona ibhulukwe, isketi, izicathulo?
Ngesitayela, izingubo nezingxoxo kufanele zihambisane. Uma inkulumo yomphakathi ingumbiko, inkulumo yesayense, inkulumo esemthethweni, bese isitayela sokugqoka kufanele sibe yinto ejwayelekile. Inkulumo engakahleleki kanye nemvelo engakahleleki, ngokufanele, ayidingi imidwebo eminingi esimweni sokugqoka.
Isici esibalulekile sokusebenza okuphumelelayo ukutadisha indawo yokusebenza okuzayo. Isihlalo, i-tribune, itafula lithatha ukuziphatha okuhlukile kwesiphakamiso, kanye nokugcinwa komthetho othile.
Imfihlo yokusebenza okuphumelelayo kuvamise ukumomotheka okulula okuqondiswe ezilalelini, i-gait eqinisekisiwe, isikhundla esikhaleni esibhekile (isibonelo, maphakathi nesiteji, hhayi ekhoneni). Isimo sengqondo sengqondo ekusebenzeni sikwandisa amathuba okuphumelela.
Indlela ukubhala iskripthi "ucingo abandayo". Iskriphthi ( "ucingo abandayo"): Isibonelo
Protocol yokungavumelani nesivumelwano - incwadi ebalulekile
Indlela ukudayisa ibhizinisi ngokushesha futhi ngokunenzuzo? Indlela ukudayisa ibhizinisi?
Egciniwe zingubudlelwane. Umcabango database zingubudlelwane
Izidakamizwa "Meloxicam": imiyalelo for ukusetshenziswa imijovo kanye suppositories
Umlando yokuziphatha kusukela endulo kuze kube namuhla
Esakhelwe ngaphakathi hood - indlela ukuhlanganisa? Hoods - isithombe. Extractor hood, esakhelwe ikhabethe
Indlela Khulisa Garlic: Izincomo
Isifingqo "Strider" obukhulu L. H:. Incazelo, izici nezilinganiso heroes